You are at:Home»Ngoma Nehosho»TISHAMWARIDZANE
MAKADII veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1 uye ndinotsvagawo murume wekugara naye ane makore 35 kusvika 40. Andifarira ngaandibate pa0784 869 292.
Munofara here? Ini ndiri mukomana ane makore 33, ndinotsvaga musikana wekuroora asina chirwere anoda zvemba ari muHarare. Anondida anondibata pa0785 178 541.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 23. nhare yangu 0779 173 497.
Ini ndiri mudzimai ane makore 38, ndiri kutsvagawo murume ane makore 40 – 45 anoda zvemba uye anonamata. Nhamba dzangu 0785 131 186.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 ndinoda murume ane makore 36 kusvika 40, anoshanda ari pamushonga. Nhare yangu 0779 946 370.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 22 zvichidzika ari pachokwadii uye asiri pamushonga. Ndinobatika 0777 757 267.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa uye ndinotsvagawo mukadzi akavimbika wekugara naye asiri pamushonga seni. Ndinoshanda, andifarira ngaandibate pa0778 004 529 chero nguva.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 29 ndinotsvagawo mudzimai anoda zveimba ane makore 20 kusvika 30. Andifarira ngaandibate pa0784 214 574.
Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvaga mukadzi uye andifarira anondibata pa0775 068 874.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 39. Ndine vana vatatu, ndinotsvaga murume akavimbika asina chirwere. Ngaave anotya Mwari, ane makore 40 zvichikwira. Nhare yangu 0775 776 162.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 28 akanaka wekutamba naye anogara kuBindura kana nzvimbo dzakakomberedza Bindura. Vanoda ndibatei pa0773 522 817.
Makadini? Ndodawo murume anoda mukadzi wekuroora ane makore 50 zvichikwira. Ndine makore 46, anondibata pa0778 053 828 asi kwete ane mukadzi.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaga musikana wekudanana naye ari pachokwadi. Ndiri murimi wefodya asi ndinoita mabasa akasiyana. Ndinobatika pa0718 778 969.
Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 30. Ngaave anoshanda, akatsvinda, ari HIV negative, mutsvuku uye anogeza. Nhare dzangu 0733 957 800.
Makadini henyu? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinodawo musikana ari pachokwadi chekuda zvemba. Ngaave akanaka ane makore 18 kusvika 24 asiri pamushonga. Anoda ngaandibate pa0771 772 873 chero nguva.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34, ndinotsvagawo murume anodawo zvekuroora. Kana paine andidawo ngandibate pa0782 175 773.
Ndiri murume ane makore 55, ndinoda mukadzi ane makore 39 kusvika 40 ari kuda zvemba. Ndiri pamushonga, akafirwa anoda ngaandibate pa0718 931 419.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 44. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora akanaka asina chirwere ane makore 40 zvichidzika. Nhare yangu 0776 898 325.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinodawo musikana ane makore 23 kusvika 28. Vanoda ndibatei pa0773 788 903.
Ndine makore 28 nemwana 1, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 19 – 25 anogeza uye akavimbika. Anoda ngaandibate pa0737 167 902 asi matsotsi kwete.
Ndiri murume ane makore 46 ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 32 – 48. Nhare yangu 0771 009 977.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nemwana 1 uye ndiri mudzidzi. Ndodawo murume anoda zvemba akavimbika anoda ndibate pa0777 929 375 asi ngaave anonamata vadzidzi.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 4, ndinotsvagawo mukadzi anoda zveparuzevha ane makore 20 – 26 anodawo vana. Nhare yangu 0737 894 593.
Ndiri murume ane makore 28 uye ndoda mukadzi ane makore 26 zvichidzika akanaka. Zvakawanda totaura pa0774 843 389.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 34 nemwana 1, HIV positive uye ndakafirwa. Handishande, ndinoda murume ane rudo anonamata ane makore 35 – 40. Ari pachokwadi fona pa0777 076 942.
Ndiri murume ane makore 32, ndogara kuBulawayo uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba asi matsotsi kwete. Ndobatika pa0777 552 929.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mukadzi anoda zvemusha. Andifarira anofona totaura zvakawanda pa0733 156 395.
Ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvakawo mukomana ane makore 25 kusvika 30 anonamata End Time Message uye asingapindi
iyoyo ngaasafone. Anoda anondibata pa0773 319 826.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana mumwe chete uye ndine makore 17. Ndinotsvagawo murume ane makore 20 kusvika 28. Kana paine anenge achindida anondibata pa0782 337 093.
Ndiri mukadzi ane makore 30, ndinoda murume ane makore 40 zvichikwira. Anoda ndibate pa0777 388 942.
Ndiri murume ane makore 32, ndinodawo mukadzi wekuwana ari pachokwadi. Ndine mwana 1, andidawo totaura pa0772 233 783.
Kava kechipiri ndichinyora asi handisati ndawana chaiye anoda kuroora, ndiri kuwana mazitsotsi ega. Ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa nemwana mumwe. Ndinorarama ndiri HIV positive asi hazvioneki nekuti ndakazvigwinyira. Ndotsvaga murume wekundiroora anokwanisa kuchengeta ini nemwana wangu ane makore 35 – 50. Asi handidi zvekutiziswa, ndinoda munhu anoita zviri pamutemo. Zvimwe tozotaura, vanoda mondibata pa0717 142 403.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, ndinodawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndoda ane makore 23 kusvika 32 asi handidi matsotsi. Nhare yangu 0782 103 626.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vatatu, ndodawo murume ane makore 40 zvichikwira ane zvaanoiita muupenyu kuti mhuri irarame. Ngaave anoda kuroora, ndinoda asingaputi, asinganwi doro uye anonamata. Ndakambonyorera, varume vevanhu nevanotamba kwete. Ndinobatika pa0718 386 691.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 32, ndiri pamushonga uye handina mwana. Ndinodawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri muHarare, andifarira ngaandibate pa0773 029 183.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe, ndinoda mukadzi kana musikana ave kuda zvemba anoratidzika chimiro uye akanakawo. Ngaave ane mwana kana asina, zvakawanda totaura pa0713 699 775. Handisi pamushonga.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndotsvagawo mukadzi ane makore 28 kusvika 34. Nhare yangu 0718 355 665.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34, ndinodawo mukadzi wekuroora anoda zvemusha. Ndine vana vaviri, nhare yangu 0773 790 596.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 46 nevana 4 vakura.
Ndinotsvagawo murume ane makore 50 – 60 asisade zvekubereka uye asina chirwere. Anoshanda andifarira ngaandibate pa0771 962 704.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye ari pachokwadi. Andifarira anondibata pa0785 139 353.
Ndiri mukomana ane makore 32, ndinotsvagawo musikana ane rudo anoda zvemusha ane makore 25 zvichidzika. Ndine mwana mumwe, nhare yangu 0775 794 896.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndinodawo mukomana kana murume anondidawo nemwana wangu.
Anonamata ngaandibate pa0779 078 040.
Makadii veKwayedza? Ndaneta kunyorera chimbobuditsaiwo tsamba yangu.
Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane mwana. Nhare yangu 0776 575 197.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 4, ndinogara nevana 2.
Ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume anorarama pamushonga ane makore 40 – 50. Andifarira anondibata pa0782 602 421.